လိမ္မော်ရောင်ရာသီသစ် (4) သည် Netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်နည်း။ - Netflix မူရင်း
လိမ္မော်ရောင်ရာသီသစ် (4) သည် Netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်နည်း။
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှု ၅၀ - Nic Cage၊ National Treasure သည်အဆင့်သို့တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သည် Netflix ၏တစ်ပတ်တာရုပ်ရှင်: Nightcrawler
မွမ်းမံချက် 1/17/2016: လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် ရာသီ4ဇွန် 17, 2016 တွင်ပြန်လာကြလိမ့်မည်!
ပန်ကာအကြိုက်ဆုံး Netflix မူရင်းစီးရီး လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် Season3ကိုပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ ထိုအချိန်မှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အချိန်တွင်စာဖတ်သူ၏မေးခွန်းများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် ရာသီ4ကို Netflix တွင်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။
မြှင့်တင်သူ၏ရာသီ ၅ သည် netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်စတင်မည်နည်း
နားထောင်ပါ။ သင့်မေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားပါတယ်။ ပြီးတော့မျှမျှတတသုတေသနပြုပြီးတဲ့အခါမှာငါတို့နောက်ဆုံးမှာလျောက်ပတ်သောအဖြေနှင့်ခန့်မှန်းချက်ရှိသည် လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် Netflix တွင်ရာသီ4လွှတ်ပေးသည့်နေ့ရက်!
ရာသီ 1: ဇူလိုင်လ 11, 2013
ရာသီ 2: ဇွန် 6, 2014
ရာသီ 3: ဇွန်လ 12, 2015
Netflix ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်မည်ဟုသာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည် လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် တစ်ချိန်တည်းန်းကျင်သူတို့စီးရီးဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။ ဇွန်လကဲ့သို့သောပြပွဲများအတွက်တကယ့်အကောင်းအချိန်ပါပဲ OITNB အဲဒီအချိန်တုန်းကယှဉ်ပြိုင်မှုမရှိယေဘုယျအားဖြင့်ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ HBO သည်နွေရာသီကောင်းမွန်သောပွဲအချို့ကိုထုတ်လွှင့်သည်။ စစ်မှန်သောစုံထောက် လွန်ခဲ့သောနွေရာသီအနည်းငယ်ကနာမည်ကြီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အများစုမှာနွေရာသီတီဗွီသည်အလွန်အစက်အပြောက်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့သိပ်မကောင်းဘူး။
ငါပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ယူ။ , အချို့သောစဉျးစားဆငျခွပြီးနောက်, ငါကြိုတင်ခန့်မှန်းတာပေါ့ OITNB ရာသီ4ဇွန် 10, 2016 ဖြစ်ပျက်သောဇွန်လဒုတိယသောကြာနေ့တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကြောင်း, ထိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းကယခင်လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲများနှင့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာသည့်ရက်စွဲအပေါ်အခြေခံပြီးခန့်မှန်းပါတယ်။
မွမ်းမံချက် (၁/၁၇) လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် ဇွန်လ 17 ရက်နေ့တွင်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်
သရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွစ်တာနှင့်အခြားလူမှုမီဒီယာအကောင့်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် ရာသီ4သည်ယခုအချိန်တွင်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သဖြင့် Netflix ကယင်းသို့ပြုလုပ်လိုပါကဇွန်လမတိုင်မီရာသီ4ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်တစ်ဝက်လျောက်ပတ်သောအခွင့်အရေးရှိသည်။
နောက်တစ်ခု:အကောင်းဆုံးလိမ္မော်ရောင်သည် Black Character အသစ်ဖြစ်သည်
ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းပိုမိုသတင်းအပေါ် post ကိုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ် OITNB ရာသီ4အဖြစ်ချိုး!
netflix အပေါ်မူရင်းရာသီ3ဖြစ်ပါတယ်
အမေရိကန်ထိတ်လန့်ဇာတ်လမ်း netflix ရာသီ 6
Netflix 100 ရာသီ 4